Nhau - Maitiro ekufananidza kunze kwerudzi rwakanakisa rwekukurumidza prototype?
Maitiro ekufananidzira kunze kwemhando yepamusoro yeanokurumidza prototype?
Sezvo iwe uchienderera mberi nerwendo rwako rwekuvandudza uye kuunza chigadzirwa chitsva kumusika, une dzakateedzana sarudzo dzekuita kana zvasvika pakuratidzira - kunyangwe iwe uchizotanga Hardware kana chigadzirwa che software, kana mubatanidzwa wezvose - iwe unofanirwa kuve nemuenzaniso wakagadzirwa.
Mushure mekunge iwe wabudirira kuisa hwaro hwekuvandudza maitiro uye wakakugadzirira iwe maCAD modhi akagadzirira, unosvika pane inotevera sarudzo. Usati wagadzira prototype yezvakagadzirwa iwe unofanirwa kusarudza kuti rudzii rwechiratidzo chauchazovaka. Kunyangwe iwe uri kuzviita iwe pachako kana kuhaya inokurumidza prototyping kambani, iwe unofanirwa kuziva icho chinangwa chako prototype chicha zadzikisa nekuti zvinobatsira kusarudza dzakakodzera nzira, hunyanzvi, uye zvigadzirwa zvekuvaka. Tine izvozvo mupfungwa, ngatipfuurei nemhando dzezviratidzo uye zvinangwa kumashure kwekuzvivaka.
Rudzi urwu runowanzo shandiswa seyakareruka mumiriri wechigadzirwa chako zano, kuyera kukura kwemuviri uye kuona kutaridzika kwaro kwakaipa. Izvo zvinonyanya kukosha kugadzira mamodheru emuviri ezvigadzirwa uye zvakakura zvigadzirwa pasina kuisa mari yakakosha kubva pakutanga. Kubata kwakanakira kwekutanga kutsvagisa kwemusika uye mhando dzakasiyana dzekuyedza kwekutanga.
Rudzi rwe prototype rwakavakwa kana iwe uchida kusimbisa pfungwa yako uye kuratidza kuti inogona kuzadzikiswa. Iyo inouya inobatsira kana uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchitsvaga
Rudzi rwechi prototype urwu rwunodaidzwawo kuti "kutaridzika- uye kushanda-senge" modhi nekuti ine zvese zvehunyanzvi uye zvinoonekwa maficha echigadzirwa chinoratidzwa. Iyo inoshandiswa kuyedza mashandiro echigadzirwa, kuitisa ongororo yevatengi, uye mushandirapamwe wekutsvaga mari.
Iyi ndiyo mhando yakaoma kunzwisisa inogadzirwa padanho rekupedzisira rekugadzirwa kwechigadzirwa. Iyo inoshandiswa kune ergonomics, kugadzirwa, uye kuyedza zvinhu, pamwe nekuderedza njodzi dzehurema panguva yekugadzira. Uyu muenzaniso uyo vagadziri vanoshandisa kugadzira chigadzirwa chekupedzisira.
Kusarudzira Partner nePrototyping Kambani
Izvo zvakakosha kuti uzive kuti prototyping inzira yekuita. Iko kusanganiswa kwehunyanzvi nesainzi iyo inokubatsira iwe kuti uzarure kugona kuzere kwechigadzirwa chako, izvo zvinowedzera mukana wayo wekubudirira mumusika. Naizvozvo, iwe ungango pfuura nemhando dzinoverengeka dzema prototypes, nerudzi rumwe nerumwe kazhinji rwuchida vashoma vhezheni kuti vawane paramende iwe yawakagadzirira iyo modhi.
Uye maitiro aya anodawo kubatsirwa nekambani inovaka prototypes kana yehunyanzvi chigadzirwa chigadzirwa timu. Iwe unogona kutanga kutsvaga iyo mushure mekunge waita yako yekutanga mockup kana humbowo hwepfungwa. Inokurudzirwa nekuti kugadzira zvakaomarara prototypes kunoreva kushandiswa kwemhando yepamusoro michina, kutsvaka zvinhu uye zvinhu zvinogona kudhura zvakanyanya kana kuomarara kuzviita pasina yakasimbiswa network yevanopa. Uyezve, hunyanzvi uye ruzivo rwunoita basa rakakura mukugadzira mhando dzemhando yepamusoro. Kutora zvese zvitatu zvinhu - zvishandiso, ruzivo uye hunyanzvi - mukufunga, zvine hungwaru kuburitsa kunze kwako prototyping zvido kukambani yehunyanzvi.
Cnc Rapid Prototyping, Inokurumidza Prototyping Uye Kugadzira, Cnc Kuchengetedza, 3d Kudhinda & Rapid Prototyping Services, Kurumidza Prototyping, Kukurumidza Prototyping,